समाचार - सोयाबीन फgic्गलसाइडहरू: तपाइँलाई के थाहा हुनुपर्दछ
कृषि रासायनिक कीटनाशक र एकारसाइड
एपीआई र मध्यवर्ती
पशु चिकित्सा माध्यमिक
सोयाबीन फgic्गलसाइड्स: तपाइँलाई के थाहा हुनुपर्दछ
मैले यस वर्ष पहिलो पटक सोयाबीनमा फgic्ides्गीसाइड्स प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छु। कुन फg्गलसाइड प्रयोग गर्ने मलाई कसरी थाहा छ र मैले कहिले यसलाई लागू गर्नुपर्दछ? मलाई कसरी थाहा हुन्छ यदि यसले मद्दत गर्दछ भने?
यस प्रश्नको उत्तर दिँदै इण्डियाना प्रमाणित बाली सल्लाहकार प्यानलमा बेट्सी बोवर, सेरेस सलुशन्स, लाफायटे; जेमी बुल्तेमेयर, कृषिशास्त्रज्ञ, A&L ग्रेट लेक्स ल्याब, फोर्ट वेन; र एन्डी लाइक, किसान र सीसीए, भिन्स्नेस।
सामर्थ्य: कम्तिमा ट्राइजोल र स्ट्रोबिलूरन सामिल हुने कार्यको मिश्रित मोडहरूको साथ फ fun्गलसाइड उत्पादन छनौट गर्नुहोस्। केहि नयाँ नयाँ घटक एसडीआईआई भी शामिल छ। एउटा छनौट गर्नुहोस् जुन फ्रोजेई पात स्थानमा राम्रो गतिविधि छ।
त्यहाँ तीन सोयाबीन चरण समयहरू छन् जुन धेरै मानिसहरूले चर्चा गर्दछन्. प्रत्येक समयको यसको फाइदा र बेफाइदाहरू हुन्छन्। यदि म एक सोयाबीन फg्गलसाइड प्रयोग गर्न नयाँ हुँ भने, म R3 चरण लक्षित गर्दछ, जब पोडहरू भर्खरै गठन हुन थाल्छ। यस चरणमा, तपाइँ चन्दवामा प्राय: पातहरूमा राम्रो कभरेज पाउनुहुन्छ।
R4 एप्लिकेसन खेलमा धेरै ढिला भयो तर हामीसँग कम रोगको वर्ष भइरहेको छ भने धेरै नै प्रभावकारी हुन सक्छ। पहिलो पटक फg्गीसाइड प्रयोगकर्ताका लागि, मलाई लाग्छ R2, पूर्ण फूलहरू, फ fun्गासिड लागू गर्न एकदम चाँडो छ।
फ fun्गीसाइडले उपजलाई सुधार गरिरहेको छ भनेर जान्नको लागि मात्र तरिका भनेको क्षेत्रमा कुनै अनुप्रयोग नभएको चेक स्ट्रिप समावेश गर्नु हो। तपाईंको चेक स्ट्रिपको लागि अन्तिम पows्क्ति प्रयोग नगर्नुहोस्, र निश्चित पट्टीको चौडाई कम्तिमा कम्बाइन हेडरको आकार वा कम्बाइन राउन्ड बनाउन निश्चित गर्नुहोस्।
फgic्ides्गीसाइडहरू छनौट गर्दा, उत्पादनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् जुन रोगहरूको नियन्त्रण प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले विगतका वर्षहरूमा सामना गर्नु भएको थियो जब तपाईंको खेतहरू स्काउट गर्दा र अन्न भर्न अघि यदि त्यो जानकारी उपलब्ध छैन भने फराकिलो स्पेक्ट्रम उत्पादन खोज्नुहोस् जुन एक भन्दा बढी कार्यको मोड प्रस्ताव गर्दछ।
बुल्तेमीयर: अनुसन्धानले देखाउँदछ कि फg्गलसाइड परिणामहरूको एकल अनुप्रयोगको लागि लगानीमा सबैभन्दा ठूलो फिर्ताको लागि लेट R2 देखि प्रारम्भिक R3 अनुप्रयोगमा। कम से कम साप्ताहिक खिल शुरू देखि सोयाबीन क्षेत्रहरू स्काउटिंग शुरू गर्नुहोस्। इष्टतम फg्गासिड अनुप्रयोग समय सुनिश्चित गर्न रोग र कीटको दबाबको साथ साथै वृद्धि चरणमा फोकस गर्नुहोस्। माथिल्लो चार नोडहरू मध्ये एकमा / / १ 16-इन्च पोड हुँदा R3 उल्लेख गरिएको छ। यदि सेतो मोल्ड वा फ्रोजेइ पातको स्पट जस्ता रोग देखा पर्दछ भने, तपाइँले R3 भन्दा अघि उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यदि उपचार R3 भन्दा पहिले देखा पर्दछ भने, दोस्रो अनुप्रयोग पछि अन्नको भरणको समयमा आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं महत्वपूर्ण सोयाबीन एफिड्स, stinkbugs, सिमी पात बीटलहरू वा जापानी बीटलहरू देख्नुहुन्छ भने, अनुप्रयोगमा एक कीटनाशकको ​​थप सल्लाह दिइनेछ।
निश्चित नगरिएको चेक छोड्नुहोस् भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि उपज तुलना गर्न सकिन्छ।
उपचार पछि उपचार नगरेका अंशहरु बीचको रोगको चापमा रहेको भिन्नतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनुप्रयोग फिल्ड स्काउट गर्न जारी राख्नुहोस्। फgic्गीसाइड्सले उत्पादन वृद्धि प्रदान गर्नका लागि, फicide्गासाइड नियन्त्रण गर्न रोग उपस्थित हुनुपर्दछ। खेतको एक भन्दा बढि क्षेत्रमा उपचार र उपचार नगरीको बीच उपजको दाँजो तुलना गर्नुहोस्।
मनपर्‍यो: सामान्यतया, R3 विकास चरणको वरिपरि फ fun्गलसाइड अनुप्रयोगले उत्तम उत्पादन परिणाम दिन्छ। रोगको सुरुवात हुनुभन्दा पहिले प्रयोग गर्नका लागि उत्तम फicide्वाईसिडलाई जान्न गाह्रो हुन सक्छ। मेरो अनुभवमा, फ्रिजिए पातको स्थानमा कार्यका दुई मोडहरू र उच्च रेटिंगका साथ फides्गीसाइड्सले राम्रोसँग काम गरेको छ। यो सोयाबीन फgic्गीसाइड्सको साथ तपाईंको पहिलो वर्ष भएकोले म उत्पादनहरूको प्रदर्शन निर्धारण गर्न केही चेक स्ट्रिपहरू वा स्प्लिट फाँट छाड्छु।
प्रमुख व्यवसायले घरेलु कीटनाशक, कीटनाशक, पशु चिकित्सा, फ्लाई नियन्त्रण, एपीआई र मध्यवर्तीहरू समावेश गर्दछ।
१F फ्लोर, ब्लाक A, COFCOHB प्लाजा न। 454545, Youii नर्थ स्ट्रीट, शीजीयाजुhu्ग, हेबई, चीन।, Shijiazhuang, Hebei